ဆာအဲလက်စ် မုန်တိုင်း…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆာအဲလက်စ် မုန်တိုင်း…။
Posted by black chaw on Aug 25, 2013 in Creative Writing, Sports & Recreation | 25 comments
ဗန်ပါစီ ၂ ဂိုးသွင်းတယ်…။
မန်ယူဘက်က လောင်းကြေးထပ်ကြသူတွေလည်း အပြည့်အ၀ပျော်ခွင့်ရခဲ့ကြပါရဲ့…။
တစ်သက်လုံး မန်ယူမှ မန်ယူ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့…
မန်ယူရဲ့ အနိုင်ရရှိမှုက လွမ်းလောက်စရာ တစ်စက်မှ မရှိ…။
အဲဒီညက ဘောလုံးပွဲကို ဒေးဗစ်မိုယက်စ် တစ်ယောက် ဆားခတ်ဖို့ များ မေ့နေခဲ့လေရော့သလား…။
အူကြောင်ကြားကစားကွက်ထဲက ဖေါက်ထွက်ပြီး ၂ ဂိုးသွင်းပေးခဲ့သော ဗန်ပါစီကိုပဲ သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးရတော့မလိုလို…။
အင်မတန်ပေါ့ရွှတ်သော ကစားကွက်တွေနဲ့…အနိုင်ရခဲ့တာက ၀ီဂန်လို ပထမတန်း က အသင်း…။
သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေက မန်ယူ အရသာစစ်စစ် နဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးနေခဲ့…။
ဒီခြေမျိုးနဲ့တော့ စပယ်ရှယ်ဝမ်းကြီး ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ မလွယ်…။
မြို့ခံပြိုင်ဘက် စီးတီးကောင်တွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ မလွယ်…။
ငယ်နိုင် အာဆင်နယ်ကတောင် နားရွက်လာတံတွေးဆွတ်ကြမှာ မြင်ယောင်သေး…။
ဒေးဗစ်မိုရက်စ်ဟာ မန်ယူနည်းပြရာထူးနဲ့ လူမှန်နေရာမှန် ဟုတ်ရဲ့လား…။
အသင်းကို အားကိုးလောက်စရာ လူသစ် ခေါ် ဖို့ နေနေသာသာ…
ရှိပြီးသား ရွန်းနီကိုတောင် မြဲအောင်ထိန်းနိုင်မယ့် ပုံ မပေါ်…။
မော်ရင်ဟိုကြီး ရွန်းနီ ကို မြှူဆွယ်နေပုံက လက်ယဉ်နေတဲ့ ကြာကူရီတစ်ယောက်ရဲ့ စတိုင်အပြည့်…။
ပိုင်ရှင် ဖြစ်နေသေးတဲ့ မန်ယူနည်းပြ ကိုလည်း မခန့်လေးစားနိုင်လွန်းတယ်…။
ဆာအဲလက်စ် ဆိုရင်ရော ဒီလိုပြောရဲပါ့မလား…။
သင်ယူပေဦးတော့ ဒေးဗစ်မိုယက်စ် ရေ…။
မော်ရင်ဟိုရဲ့ စကားလုံး စစ်ပွဲ မာယာတွေကို သင်ယူပေဦးတော့…။
ခြေစမ်းပွဲတွေရဲ့ အရှုံးရလဒ်တွေကလည်း မန်ယူရဲ့ ပုံရိပ်ကို မှေးမှိန်စေခဲ့ပြန်ပါသည်…။
ဒါတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ပျက်စေသော အချက်အလက်တွေပါပဲ…။
အလွမ်းဓါတ်ခံလေးကလည်း ရှိနေလေတော့…ဘောပွဲကြည့်ရင်း…အလွမ်းစိတ်တွေ ဖြစ်နေမိပါရဲ့…။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အနိုင်မခံခဲ့တဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ မှတ်တမ်းတွေ…။
နောက်ဆုံးမိနစ်တွေကျမှ အရှုံးမှ အနိုင်သို့ ပြောင်းနိုင်ခဲ့သော မန်ယူစိတ်ဓါတ်…။
ဖရီးကစ် စပယ်ရှယ်လစ် ဘက်ခ်ဟမ်း…။
အတွဲညီခဲ့တဲ့ ဒွိုက်ယော့ နဲ့ အင်ဒီကိုးလ်…။
ကလေးမျက်နှာနဲ့လူသတ်သမား ဆိုးလ်ရှား…။ ရှရင်ဂမ်…။
ဂိုးသမား ကြီး ရှမိုက်ကယ်…။
ခံစစ်မှူးကြီး စတမ်း၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း…၊ ဗီရွန်…၊ တီဗက်…။
စသည်ဖြင့် လွမ်းတတ်ရင် လွမ်းစရာတွေချည့်…။
မန်ယူကစားသမားဘ၀နဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စီ ရော်နယ်ဒို…ရဲ့ အတို့အဆိတ်လေးတွေ…။
ရသမြောက်တဲ့ ကစားကွက်တွေနဲ့ ဂိုးသွင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လွမ်းတယ်…။
မကြာခင် ရွန်းနီကိုပါ လွမ်းရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့…။
မင်းလို တောခြိုခြုံကြားက အစုတ်ပလုတ်ကောင်တစ်ယောက်လွမ်းတာများ စာဖွဲ့လို့…။
ဟိုက ပေါင်စတာလင် သိန်းသန်းနဲ့ ချီတဲ့ လစာငွေတွေအတွက် ကျားကွက်ရွှေ့သလို သူတို့ ဘ၀တွေကို ရွှေ့လို့…။
ချောပေ့လှပေ့ ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်မတွေ…မင်းသမီးတွေ…အဆိုတော်မတွေကို…တော်ကောက်သိမ်းပိုက်လို့…။
မင်းလွမ်းတာလောက်တော့ ဒီ လူလွန်မသားတွေက လှည့်ကြည့်နေလိမ့်မယ် ထင်မနေနဲ့ဦး…။
အေး ဒင်း တို့ကို ငါ မလွမ်းတော့ဘူး…။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတော့ လွမ်းဆွတ်တမ်းတခွင့်ပြုပါ ကွယ်…။
ဆာ အဲလက်စ် ဖာဂူဆန်…။
ခင်ဗျားကြီး ရက်စက်လွန်းပါတယ် ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်…။
ခင်ဗျားကြီးက အားကောင်းလွန်းတဲ့ မုန်တိုင်းတစ်လုံးပါဗျာ…။
တစ်လောကလုံး ကို မညှာမတာ လှည့်ပတ်တိုက်ပြီး…တိုက်စရာမကျန်တော့မှ
လှည့်ထွက်သွားသလိုမျိုး ခင်ဗျားမို့ လုပ်ရက်တယ်…။
ကျွန်တော်တို့မှာတော့ ခင်ဗျားတိုက်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဗြောင်းတွေကိုဆန်လို့…။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်မနာနိုင်ပါဘူး…။
အချိန်ရလို့ မြန်မာပြည်ဘက်ရောက်ရင် ၀င်ခဲ့ပါဦးဗျာ…။
မြန်မာပြည်ရဲ့ မေမြို့ဝိုင်လေး တစ်ခွက်လောက် တိုက် မလားလို့…။
(မှတ်ချက်။ ။ မန်ယူ နှင့် ၀ီးဂန် ကန်ခဲ့သော ပွဲပြီးခဲ့သည့် ည က ရေးထားခဲ့သော ပို့စ် ဖြစ်ပါသည်…။
အခု မန်ယူ က ဆွမ်ဆီး အသင်းအား အဝေးကွင်းတွင် ၄ ဂိုး ၁ ဂိုး ဖြင့်နိုင်ပြီး ချန်ပီယံခြေစွမ်း ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်…။
မန်ယူ ပရိသတ် စစ်စစ် များ သည်းခံခွင့်လွှတ် ဖတ်ရှုကြပါကုန်…။)
ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပဲဟ..ဆိုပြီး….
ခပ်မြန်မြန် ၀င်ဖတ်လိုက်ပါတယ်..လေး ဘလက်ရေ… ။
ကိုဘလက်​ကြီး​ရေ … ပြန်​​တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်​ဗျို့
ကျ​နော်​လည်း ဆာကြီး ကိုသတိယလျက်​ပါဗျာ
​လောင်းကစားသမားဘက်​ကကြည့်​ရင်​လည်း ဆာကြီး ကအ​သေမသတ်​ဘူးဗျို့
ကစားကွက်​နဲ့ မန်​ယူစိတ်​ဓတ်​ကို ​ဖော်​​ဆောင်​တာအကြိုက်​ဆူံးပဲ
သိပ်ပရိုဆန်လွန်းတော့လည်း ကဗျာ ဆန်ချင်မှ ဆန်လိမ့်မပေါ့ ဘဘဘလက်ရေ..
ဘိုးတော် က သိပ်လှတဲ့သမိုင်းကို ထားခဲ့သူပါဗျာ..
သူအိုပြီလေ …သူနာတော့မှ မိသားစုကို အချိန်ပေးမယ်ဆို သူသိပ် တကိုယ်ကောင်းဆန်ရာကျမပေါ့
သည်တော့ သူ့ လက်ကျန် ကာလအပိုင်းအခြားကို မိသားစုအတွက် ပေးတာကျနော်တို့ မတ်တပ်ရပ် လက်ခုပ်တီးကြရအောင်လားဗျာ…
မိုယက်စ်ကိုလည်း အားပေးရင်းပေါ့..(စကော့အချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့လုပ်သွားတာတော့ သိပ်မနှစ်မြို့ဘူးဗျ)
တကယ်တော့ ယူနိုက်တက်ဆိုတာ မော်ရင်ဟို ခေါ်မလား ကာပယ်လိုခေါ်မလား ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတွေအကုန်
မျက်ခုံးပင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်း မဟုတ်လား… မိုယက်စ်က ဒုတိယတန်းစား ဆန်လွန်းတယ်..သို့ပေတဲ့
သူ့ကိုရွေးပြီးပြီ ဆိုမှတော့ ယုံကြည့်ကြရုံသာ ..
နောက်တဆင့်ကို အတူတူ တက်ကြတာပေါ့ ဗျာ…
၀ိုင်းကြ ၀န်းကြမယ့် နဗီးလ် တို့ ဂစ်စ် တို့ကလည်း လူညံ့တွေ ဖလာ တွေမှမဟုတ်တာရယ်..
မန်ယူ ပိတ်သတ် စစ်စစ်လေးသွားခေါ်လိုက်ဦးမယ်။
.. မန်ယူမှာ player ကောင်းတွေ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ကြတာ ကြာတော့ သိပ်မခံစားဖြစ်တော့ဘူး.. ဘက်ခမ် ထွက်သွားတုန်းကတော့ အတော် feel ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်.. နောက်တော့ ဒါ သဘာဝပဲ လိုသိသွားတော့ သိပ်မခံစားဖြစ်တော့ဘူး.. ဒါပေမယ့် ဆာအဲလက်စ် ထွက်သွားတာကတော့ ခြားနားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ.. ကိုယ့် မသိစိတ်ထဲမှာ မန်ယူ နဲ့ ဖာဂူဆန်ဆိုတာ သက်သက်စီမြင်လို့ရခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှ မဟုတ်ပဲလေ.. ဒါပေမယ့် အောင်အောင်မြင်မြင် နှုတ်ဆက်သွားနိုင်တာရယ်၊ သူ့မိသားစု အတွက် အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်တာရယ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေကျေနပ်နပ် ဂုဏ်ပြုလို့ရလိုက်ပါတယ်..
.. မိုယက်စ် ကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်.. ဖာဂူဆန်ကိုယ်တိုင် မန်ယူကို စကိုင်ကာစက လျှမ်းလျှမ်းတောက် နည်းပြ အနေနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်တာကြောင့် သူနဲ့ အလားသန္တန်တူတဲ့ နိုင်ငံတူ ဂျူနီယာတစ်ယောက်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်..
သူ့အသက်အရွယ်ကလည်းနားဖို့အနေအထားဆိုတော့လဲ.. နားပါစေလေ.. အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး သိက္ခာရှိရှိနည်းပြဘ၀ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘိုးတော်ကြီးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်.. တခါတလေလူမထင်တဲ့အကွက်တွေနဲ့ထွက်လာတတ်တဲ့အဖိုးကြီးကိုတော့ သတိယနေရအုန်းမှာပါ..
စိတ်ဝင်စားသည် ဖြစ်စေ၊ မ၀င်စားသည်ဖြစ်စေ…။
မဆုံဖြစ်ကြတာ အတော်တောင်ကြာနေခဲ့ပြီ နော်…အန်ကယ်ကြီးရေ…။
အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားမှုကို ချရေးလိုက်တာပါ…။
မိုရက်စ် ကို ကျွန်တော်တို့ အချိန်ပေးရမှာပါ…။
ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာ ပါတယ် ကိုဆာမိကြီးရေ…။
ဒါ…ဆာအဲလက်စ် ကို လွမ်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ…။
@ Min Zarni ;
အီတာလျန် ခရေဇီ ဖြစ်တဲ့ ညီလေးကတောင်
ဆာအဲလက်စ် ရဲ့ အနားယူမှုကို နားလည်စာနာပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့…
မန်ယူခရေဇီဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တို့က ပိုနားလည်ပေးရမှာပေါ့ကွယ်…။
@ gar field ;
မန်ယူပိတ်သတ် စစ်စစ်လေး တဲ့…။
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…။
ကျောင်းဒကာကြီးပြောသလို ဒီရာသီ မန်ယူပွဲကြည့်ရတာ
ဟာတာတာဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ ။
သို့ပေသိ အပြောင်းအလဲ ဆိုတော့လည်း
နောက်လူက သူ့ထက်မသာတောင် သူ့လောက်နီးနီးကောင်းပါစေလို့ပဲ. ။
ဒီညပွဲကြည့်ပီးမှ မန်ယူအသင်းကို ခြေမှန်လို့ရမယ်ထင့် ။
ကိုယ်တချိန်ကိုင်ရမယ်လို့ သေချာနေသလောက်ရှိတဲ့ အသင်းကို
ပြချင်လွန်းနေမဲ့ မော်ရင်ဟို နဲ့ ဒီလိုအသင်းကိုနည်းပြဖို့အတွက်
အဆင့်မှီကြောင်း ဒီပွဲမှာ သက်သေပြချင် ညဏ်ကုန်ထုတ်မဲ့ မိုယက်စ် … ။
ဒီချိန်ဆို ချစ်သောဖာဂီလည်း မိုယက်စ်နဲ့ မန်ယူ တသားတည်းဖြစ်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်နေမှာရယ် ။
မြင်ရတွေ့ရခဲတဲ့ ညီလေးရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို
မြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်ရတာနဲ့တင် ဒီပို့စ်လေး တင်ရကျိုးနပ်ပြီပေါ့ဗျာ…။
ညက ကန်သွားတာတော့ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုရော ကစားကွက်ရော
လိုရာဆွဲပြောရရင် လက်ထိဘောတွေသာ ပင်နယ်တီရခဲ့ရင်…
မော်ကြီး ငိုင်ကျသွားမှာ မြင်ယောင်နေသေး…ဟေးဟေး…။
ဆရာဘလက်ချော.. ခုမှ မန်ယူဖန် ဖြစ်တာ သိရတော့တယ်…
ဖာဂူကြီးမရှိတော့ မန်ယူကစားကွက်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းတော့
အရင်ကတော့လောက် ဒီနှစ်ရာသီရှိမယ်မထင်တော့ဘူး…။ ။
သို့ပေမဲ့ ဆင်ပိန်ကျွဲလောက်ရှိပါသေးတယ်… ပရီးမီးယားလိဂ်ပိုင်း
စိတ်ချလို့ရပေမဲ့ ချန်လိဂ်တို့ ဥရောပအဆင့်ကျတော့ ဒီနှစ်
တယ်ပီးအောင်မြင်မယ်လို့ မမှန်းဘူး။ သေချာဒါကတော့ မိုယက်စ်လည်း
နည်းပြညံ့မဟုတ်ပါဘူး.. မန်ယူ ဖန်များ စိတ်အေးအေးထားဘာလော့..
ကိုယ်တွေ လီဗာဘူးကြီး ခုထိ ရှူံးပွဲမရှိသေးဘူး.. ငိငိ…
ပြန်ရောက်မှ. .မန်ယူနဲ့ ဘာဘူတွေ့ရင်.. လေးဘလက်နဲ့ ၀မ်းစလုတ်ကြေးလောင်းမယ်…
ရှူံးဒဲ့လူ ဒရက်ကူလာ ဖြစ်ကြေးးး
ဖာဒီနန် ဗီဒစ် အီဗရာ ၃ယောက်ပေါင်း အသက် တရာလောက်နဲ့ ဘာဖလား လိုချင်တာတုန်း
ဟာဇက် မာတာ အော်စကာ ..သိပ်မြန်တဲ့ကောင်ဒွေ…
ဒချိ ဒချိ လိုက်လို့ ငိငိ မအော်နိုင် ဖြစ်သွားမယ်
ကွန်းမန့်လေးအတွက် အထူးကျေးဇူးနော် ညီလေးရေ…။
ကိုယ်က မန်ယူ ဖန် ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူးကွယ်…။
လက်မောင်းကို ဆတ်ကနဲ ထိုးထည့်လိုက်…။
ထွက်လာတဲ့ သွေးကိုက မန်ယူသွေး စစ်စစ်…။
ဒိုင်ယာလော့ခ်ကို ခိုးချထားတာ ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံပါတယ်ဗျာ…)
(အပျော် ပါ ညီလေးရေ…။)
ဆာအဲလက်စ် ကိုယ်တိုင်က ယုံယုံကြည်ကြည် ရွေးချယ်ပေးတဲ့သူမို့
မိုယက်စ်ကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ချက် ထားပါတယ်။
ရလာဒ်တွေ ဘယ်လောက် ဆိုးပြီး နေပါစေ
နောက်ဆုံးမှာတော့ သရဲနီဟာ သရဲနီပါပဲဗျာ
ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ကိုမာဃရေ…။
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူရဲနီ ဟာ သူရဲနီပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ…။
မသိရေးချ .. ခရေဇီမဖြစ်ဗျာ…။
ပြောသာပြောတာ..ခုတလော.. ခလေးမတွေ.. ဘောလုံးဘောင်းဘီတွေနဲ့.. အပြင်မှာခဏခဏတွေ့တယ်..
ဖက်ရှင်လား.. တကယ်ကန်ကြတာလား.. မသိ..
ပါရာဂွိုင်းလ် ရယ် ရီကွယ်မီးလ် ရယ် ဆိုတဲ့ ကီးဝေါ့လေး ၂လုံးနဲ့ ရှာကြည့်သဂျီးရေ…
ပေါက်စီ ဆိုလို့ ကလေးတွေက ဟိုပေါက်စီကို ပြောတယ် ထင်နေဦးမယ်ဗျ…။
သူကြီးပြောတာ မန္တလေးတိုင်းက ပေါက်စီကို ပြောတာနေမှာပါ…။
အမေရိကန် ဂိုးသမားလေး ဟုတ်ဆိုလို ကိုတွေ့ရင်…
သူကြီး ဘောလုံးကို စိတ်ဝင်စားလောက်မယ် ထင်ပါရဲ့…။
ဆာအဲလက်စ်ကြီးကို ဘိုင်ယန်က ဂျာမန်တွေ ပုလဲခအောင်လုပ်ဖူးလို့…
လက်မအကြီး ကြီး ထောင်ဖူးတယ်ခင်ဗျ…
ကျန်တာကတော့ ကျောက်စ်လည်း ဘောနဲ့ဝေးသူမို့…